WOLADOR कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु - कुकुरहरु
Wolador कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु
टिम्बर वुल्फ / लैब्राडोर रिट्रीभर मिश्रित ब्रीड कुकुरहरू
'यो एबी हो, मेरो Wolador (टिम्बर वुल्फ / कालो Labrador)6वर्षको उमेरमा। उनी आफ्नो कचौरामा कान्छी थिइनन् र एक मात्रै जुन ल्याब्राडोरसँग मिल्दो देखिन्थ्यो। यद्यपि, हरेक बर्ष उनको भुवा बढी ब्वाँसो जस्तै भइरहेको छ, उनको कोटमा बढी जलाइएको रातो / खैरो रंग भएको। जाडोमा उनीसँग कालोसँग मिसिएको जलाइएको रातो रंगको हाइलाइटहरू (अधिक स्प्लटहरू जस्तै) संग पूर्ण कोट छ।
'उनी आफ्नो परिवारसँग अत्यन्त मिठो र मायालु छिन्, सुरुमा अपरिचितहरूबाट थकित छिन्, तर त्यसपछि सजिलैसँग उनीहरूलाई हार्दछन् (विशेष गरी जब उनीहरूसँग कुकुरको उपचार हुन्छ)। उनी प्रायः सबै चीजहरूको लागी पीछा गर्छिन्, चराहरू उनको माथि उडान मार्ग सहित, बगहरू, गिलहरी, केही बिराला र कृन्तक। उनी उनको अनुहारमा धेरै भावुक छिन् र गट्टुरल आवाजको माध्यमबाट 'तपाईंसँग कुरा गर्छिन्'।
'ऊ ओछ्यानमा पर्दा ऊ आफ्नो अगाडी पञ्जा पार गर्दछे। साथै, उनले कहिल्यै आफ्नो खानाको कचौराबाट कहिल्यै खाएनन् जब हामी त्यसमा खाना राख्छौं उनी कोमलतासाथ (शाब्दिक रूपमा) उसको पञ्जाले पल्टाउँछिन् .... एक पटक हामीले केवल भुइँमा खाना हाल्ने प्रयास गर्यौं र उनले यो खाइनन्। हामीले पनि 'गैर-टिप कचौरा' प्रयास गरेका छौं। उनीले कसरी टिप गर्ने भनेर उनले सोधिन् :)! चाखलाग्दो कुरा के हो भने उनीसँग आंशिक रूपमा वेब खुट्टाहरू छन्, तर HATES पानी ... यसको नजिक जाने छैन जबसम्म यो पानीको थालमा हुँदैन। लेकमा पनि उनी त्यसमा पिउनेछिन जब सम्म पिउँदैनन्।
'किनभने उनी ब्वाँसो हो, उनी कराउँछिन्। विशेष गरी जब साइरन जान्छ। मलाई मन पर्छ कि उनी यती मायालु छिन्, र सबै समयमा खेल्न तयार छन्। साथै, उनी शेड गर्छिन् धेरै सजिलो रखरखाव, तर दैनिक ब्रश साथ यो खराब छैन।
'उनीले स्यान्डपेपर लिन्छिन् र च्यूहरू यो। यदि हाम्रो बगैंचामा हात उपकरणहरू सुरक्षित रूपमा छैन भने उनी च्यूहरू नरम रबर बन्द।
'म उनलाई हरेक हप्ता-माइल दौडमा लिएर जान्छु र हप्तामा दुई चोटि लामो हिंड्दछु। उनीसँग मेरो विचारमा अधिक हुनुपर्दछ, तर उनको सामग्री राख्न यो पर्याप्त छ। उनले पट्टामा तानिछिन् (उनको भन्दा मेरो गल्ती)। हामी उनी र उनको बल वा टग डोरीसँग दैनिक खेल्छौं (ती उनीका मनपर्दो हुन्!) '
वोलाडोर शुद्ध कुकुर होईन। यो टिम्बर वुल्फ र लैब्राडोर पुनःप्राप्ति । मिश्रित जातको स्वभाव निर्धारण गर्न उत्तम तरिका भनेको क्रसमा सबै नस्लहरू हेर्नु र तपाईंलाई कुनै पनि नस्लमा फेला परेका कुनै पनि सुविधाहरूको कुनै संयोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जान्नु हो। वुल्फ हाइब्रिडको स्वामित्व हुने जो कोहीले सिक्नको लागि अतिरिक्त समय लिनुपर्दछ जनावरको प्राकृतिक प्रवृत्ति र व्यवहार । यी सबै डिजाइनर हाइब्रिड कुकुरहरू उत्पादन गरिंदैन 50०% शुद्ध प्रजननको 50०% शुद्ध प्रजनन हुन्। यो प्रजनकका लागि प्रजननको लागि धेरै सामान्य छ बहु-पुस्ता पार ।
Labrador पुनःप्राप्ति मिश्रित जात कुकुरहरूको सूची
बोर्डर कोलकी ज्याक रसल मिक्स
चाऊ जर्मन गोठाला मिक्स पिल्ला
बर्नेस पहाड कुकुर जर्मन गोठालो संग मिक्स
घरपालुवा जनावरको रूपमा चिनी ग्लाइडरको तस्वीर
किंग चार्ल्स spaniel र bichon मिक्स
मुसा टेरियर र चिहुआहुआ बीचको भिन्नता